featured Archives - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Admin - Oct 4, 2020
Kitaabni mataduree 'Siyaasa Oromoo: Imala Obsa Fixachiisaa fi Hegeree Abdachiisaa' jedhu eebbifamee gabaa irra ooleera. Kitaabichi kan eebbifame Ebla 3, 2019 Finfinnee Galma Giddugala...
Hiriirri amma adeemaaru ajjeechaan akka nurraa dhaabatuuf kan yaadame ta’us, hiriirri kun geggeeffamuu isaattii, hunda caalatti, kan gammade TPLF/Woyyaaneedha. Woggaa 2 dura qaamni akka...
Raayyaan ittisa biyyaa waraana karaa daangaa Somaaleetiin nurratti labsamee ture hir’isuu irratti shoora guddaa taphateera. Har'a waa'ee Liyyuu Poolisii Somaalee, humna guyyaa guyyyatti dhiiga...
TPLF hawwii ummanni Itoophiyaa jijjiiramaaf qabu simachuuf qophii akka hin taane ifa goote. Kun ifa kan ta'e kora TPLF 13ffaa tibbana Maqaletti geggeeffame irratti. TPLF...
Kallattii Sulultaan gara Finfinneetti seenaa kan ture Kilaashiin 40 too'annaa jala oole. Kanaan alattis shugguxuii 50tu qabame. Poolisiin Oromiyaa hujii boonsaaf galata qabu. Dhiiroo jarreen...
Woyyaaneen jalqabatti Wotaritti nama fixxe. ABOtu kana godhe jette. Itti aansitee Baddannotti ummata fixxe. Ammas, ABOtu kana godhe jette. Kaayyoon isii Amaaraa fi Oromoo...
Wanti ta'aa jiru ifa. Humnoonni kufaatii Oromoo malee miilaan dhaabachuu isaa arguu hin hawwinne, Oromoo bulchuu malee Oromoo waliin biyya bulchuu hin feene kallattii...
Daawwannaa ministerri muummee Itoophiyaa, Dr Abiyyi Ahmad, Ertiratti godhe hordofee biyyoonni lamaan woldhabdee woggaa 20’f turetti xumura godhuu fi boqonnaa haarawa saquuf murteessuu isaanii...
Manni Marii Itoophiyaa Labsii Yeroo Muddamaa (LYM) baatii afuriif ture guyyaa har'aa kaase. LYM kun kan ka'e haalli nageenya biyyattii abdachiisaa ta'uun isaa erga...
Jilli hoogganootaa ol'aanaa ODF/ADO Kiibxata gara Itoophiyaatti akka imaluu fi guyyaa Roobii magaalee Finfinnee akka seenu beekame. Jilli kuni kan gara biyyaa imaluuf haala biyyatti...